Tupolev Tu-144 ပြီးပြည့်စုံအထုပ် 2.0 FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 59,4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 13 719
Author: သောမတ်စ်ရုသ် Claudio Mussner
ဤတွင်ဆိုဗီယက်အသံထက်မြန်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်လအနောက်ပိုင်း Concorde မီက 1968 အတွက်ပထမဦးစွာလေယာဉ်ခရီးစဉ်။ ဒါ့အပြင် "Concordski" သို့မဟုတ် "အားသွင်းကိရိယာ" အဖြစ်လူသိများ။
လေးဗားရှင်းပါဝင်သည်။ စံ, တိုးတက်လာသောနှင့်နာဆာဗားရှင်းပေါင်းတစ်ပြီးစီးခဲ့ဘယ်တော့မှခေတ်မီဗားရှင်း။ နယူးအပြည့်အဝ functional ကို virtual cockpit, INS, autoland နှင့်များစွာသောအခြား feature များနှင့်အတူသစ်ကို 2D panel က။ အများစုကအသစ်စိတ်ကြိုက် XML ကို animations တွေကို။ အသံဖိုငျမြားကိုမှန်ကန်ပြေး TU144 အင်ဂျင်နှစ်ယောက်အမျိုးမျိုးအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
ဤသည်အလွန်နည်းပါး add-on တစ်ခု FS2004 များအတွက်ခြင်း simulation ဒါကြောင့်တွန်းသည်အဘယ်မှာရှိတယောက်ပါ! ကျနော်တို့ကသာအရည်အသွေးဒီအဆင့်ခံစားနိုငျအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ထိန်းချုပ်မှုပြားကြောင်းသေးသေးလေးခလုတ်နှင့်အတူချယ်လှယ်ကြပြီ ကျနော်တို့ကို manual စာဖတ်ခြင်းကနေလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Tupolev Tu-144 (နေတိုးသတင်းပို့အမည်: "အားသွင်းကိရိယာ '") ကို Concorde နှင့်အတူအရပ်သားဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းဖို့ကမ္ဘာ့နှစ်ခုအသံထက်မြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပျံ (SST) ၏တစျခုဖွစျသညျနှင့်ခေါင်းနှစ်လုံးဆိုဗီယက် Tupolev ဒီဇိုင်းဗျူရို၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျဆောကျလုပျခဲ့ Alexei Tupolev အားဖြင့်။
Tu-144 တစ်ချိန်တည်းမှာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအောက်, Aérospatiale / ကဗြိတိသျှလေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း Concorde မှအပြင်ပန်းအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဆိုဗီယက်သူလျှို Tu-144 အအမည်ပြောင် "Konkordski" သို့မဟုတ် "Concordski" ပေးခြင်း, အဓိကအခန်းကဏ္ဍကကြောင်းမကြာခဏစွပ်စွဲချက်တွေရှိကြ၏ ။ ကုမ္ပဏီ၏အခြားကြီးမားသောအသံထက်မြန်လေယာဉ်ဒီဇိုင်းနှင့်စစ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များရန်တည်ဆောက်ခဲ့ကြအဖြစ် Tu-144, Tupolev ရဲ့သာအသံထက်မြန်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်အကျိုးတူခဲ့သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်လေယာဉ်တင် TsAGI, ဗဟို Aerohydrodynamic Institute မှနည်းပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာ input ကိုကနေအကျိုး။ McDonnell Douglas, Lockheed နှင့်ဘိုးအင်းအ 1960s စဉ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်အောင်မြင်မှုမရှိဘဲအမေရိကန်စျေးကွက်အတွက် SST ယာဉ်ဒီဇိုင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သူကိုသုံးအခြားထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကရှေ့ပြေးပုံစံ (OKB: 044 izdeliye - ဆောင်းပါး 044 ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးလ Concorde ရှေ့, မော်စကိုမြို့အနီး 31 ဒီဇင်ဘာလတွင် 1968 အပေါ်ပျံသန်းအဆိုပါ Tu-144 ပထမဦးဆုံး5ဇွန်လ 1969 အပေါ်အသံအမြန်နှုန်းကိုဖဲ့နှင့် 15 ဇူလိုင်လ 1969 ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Mach နှစ်ဦးထက်မပိုရန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ အဆိုပါ Tu-144 နှစ်ခုနီးပါးနှစ် Concorde ပြီးနောက်, 1 နိုဝင်ဘာလ 1977 အပေါ်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့် 55 မှုကြောင့်လေယာဉ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူအလားအလာပြင်းထန်တဲ့ပြဿနာခရီးသည်တင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်မခံခဲ့ရပြီးနောက်မကြာမီဆုတ်ခွာခဲ့သည် ဝန်ဆောင်မှုမှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Tu-144 အ Concorde မှနည်းပညာပိုင်းအမြင်ကျယ်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပေမယ့်, ကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းခရီးသည်တင်ဈေးကွက်ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပေသာ 102 စီစဉ်ထားပျံသန်း (55 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်, ကြွင်းသောအရာကုန်တင်) ပြီးနောက်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ Concorde သုံးနှစ် 2003 ဇူလိုင်လ 4590, အရပ်သားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု SST ၏တစ်ခုတည်းသောဆုံးရှုံးမှုအပေါ်ပဲရစ်မြို့အနီးလေတပ်ပြင်သစ်လေယာဉ် 25 ၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအပြီးဆုတ်ခွာခံရ 2000, သည်အထိဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျန်ရစ်၏။
ဆိုဗီယက်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမဂ္ဂဇင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဇန်နဝါရီ 144 ပြဿနာတစ်ခုဆောင်းပါးထဲမှာ Tu-1962 ၏အယူအဆပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်ဝန်ကြီးဌာနအစောပိုင်းကဝန်ကြီးများ 144 ကာလ၏ကောင်စီကခွင့်ပြုချက်အောက်ပါ, 26 ဇူလိုင်လ 1963 အပေါ် Tu-10 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုနှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Concorde ထက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ လေးနှစ်အတွက် built ခံရဖို့ငါးပျံရှေ့ပြေးပုံစံကိုခေါ်အဆိုပါအစီအစဉ်။ ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင် 1966 အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ပဲ။
Anglo-ပြင်သစ်အသံထက်မြန်လေယာဉ်မှ Tu-144 ၏အသွင်အပြင်အတွက်နီးစပ်တူညီနေသော်လည်းသိသာထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကွဲပြားမှု, အညွှန်းနှင့်အင်ဂျင်စနစ်များရှိကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောအကွာအဝေး, လေခွင်းရှုပ်ထွေးမှုများ, ဘရိတ်နှင့်အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဒေသများရှိ, Tu-144 အ Concorde နောက်ကျ။ အ Concorde လူးကပ်ထံမှတစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်မှုအထုပ်အသုံးပြုသွားမည်နေစဉ်ကစစ်ရေးလေယာဉ်ပေါ်တွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်မည်အဖြစ်, Tupolev Tu-144 ကြောင့်ဝယ်ယူခွင့်မရခဲ့သည်။ အဆိုပါ Concorde ရဲ့ဒီဇိုင်နာလေအေးပေးစက်များအတွက်အအေးလေယာဉ်နဲ့ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် (အသေးစိတျအဘို့ Concorde # အပူပြဿနာများကိုရှု) အတိုင်းဤလေယာဉ်၏လောင်စာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Tupolev အလေယာဉ်၏အလေးချိန်တိုးလာ, ဒီပွီးမွောကျ Tu-144 အပေါ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို install လုပ်။
Tupolev Tu-144 တိုးတက်လာဖို့လုပ်ကိုင်ဖို့ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အများစုကသိသိသာသာအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အပြောင်းအလဲများကို Tu-144 ရှေ့ပြေးပုံစံ (serial number 68001) အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အ Concorde နှင့် Tu-144 ရှေ့ပြေးပုံစံနှစ်ခုလုံးကို ogival မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အတောင်ပံခဲ့စဉ်တွင်, Tu-144 ရဲ့တောင်ပံအ Concorde ရဲ့ conical camber ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထုတ်လုပ်မှု Tu-144s conical camber အပါအဝင်တစ်ဦးကို double-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံနှင့်အတူဤတောင်ပံအစားထိုး, သူတို့သည်တစ်ဦးအပိုရိုးရှင်းသောဒါပေမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့ device ကိုကဆက်ပြောသည်: အနိမ့်မြန်နှုန်းမှာဓာတ်လှေကားတိုးမြှင့်ဖို့ငယ်နှစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် canard မျက်နှာပြင်များလေယာဉ်ပေါ်မှာရှေ့သို့အပိုင်း၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တဦးတည်း။
တစ်ဦးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-တောင်ပံလေယာဉ်အတွက်အောက်ဖက်အ elevons Moving အဓာတ်လှေကားတိုးပွါး, ဒါပေမယ့်လည်းအောက်ဖက်က၎င်း၏နှာခေါင်း pitches ။ သို့သော်နေဆဲမြန်မြန် Concorde ၏ထက် - အ canard ဤသို့ 144-315 km / h (333-170 KN, 180-196 တစ်နာရီမိုင်) အားထုတ်လုပ်မှု Tu-207s ၏ဆင်းသက်မြန်နှုန်းလျှော့ချ, ဒီနှာခေါင်း-အောက်သို့ယခုအချိန်တွင်ထွက်ဖျက်သိမ်း။ အဆိုပါနာဆာလေ့လာမှု, သို့သော်ဤအအထူးအမြန်နှုန်း၏အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောအကွာအဝေးမှာဆင်းသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်စမ်းသပ်ပျံသန်းမှုစဉ်အတွင်းကျင့်သုံးချဉ်းကပ်မှုအမြန်နှုန်းရှိကြ၏, မိုင် (144 km / h 170 မှ) 181 မှ 315 အဖြစ်ဖျော်ဖြေ Tu-335LL စမ်းသပ်ပျံသန်းမှုစဉ်အတွင်းနောက်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုမြန်နှုန်း lists မခွဲခြားဘဲဆင်းသက်စေနိုင်သည်ဘယ်လောက်ခဲယဉ်းနှင့်တည်ငြိမ်၏။ ပုံမှန်ဆင်းသက်ရန်အဖြစ်, FAA မြို့ပတ်ရထားစာရင်း Tu-144S ချဉ်းကပ်မှုမြန်နှုန်း 178 မိုင် (330 km / h) အတိုင်း, ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်သိသာအခြေစိုက် BAC / Aerospatiale Concord (င) 162 မိုင် (300 km / h) ၏ချဉ်းကပ်မှုအမြန်နှုန်း, ဆန့်ကျင် အနောက်တိုင်းစည်းမျဉ်းအလောင်းတွေမှထုတ်လုပ်သူများကကြေညာခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့ Tu-144S အဖော်ပြထားသော Airspeed မှာဘယ်လောက်တည်ငြိမ်တဲ့အငြင်းအခုံမှပွင့်လင်းသည်။ နာဆာတစ်ဦး Tu-1990LL စံမှကျန်ရှိသော Tu-144D တဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ 144s အတွက် Tupolev ဗျူရိုနှုံးသောအခါအဘယ်အဖြစ်အပျက်အတွက်, ဆင်းသက်ဘို့ Tupolev အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမိန့်အပေါ် ... Tu-144LL "နောက်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုအမြန်နှုန်းကိုသတ်မှတ် လောင်စာအလေးချိန်ပေါ် မူတည်. 360 ကီလိုမီတာ / နာရီ၏။ " ဘရိုင်ယန် Calvert က, Concorde ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပျံသန်းမန်နေဂျာနှင့်အများအပြားဖွင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကွပ်မျက်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်မှူး, km / h 155 ဖို့, ဆိုလိုသည်မှာ 160 မိုင် 287 မှ 296 ဖြစ်နိုင်ဖို့ပုံမှန် Concorde ဆင်းသက်၏နောက်ဆုံးချဉ်းကပ်မှုအမြန်နှုန်းကိုကိုးကား။ တစ်ဦး feature ကိုမကြာခဏ Concorde အပေါ်အနောက်တိုင်းစာပမြေားတှငျဖျောပွထားနှင့်အဖြစ် Tupolev ဒီဇိုင်နာများကအသိအမှတ်ပြု - Tu-144 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့် Concorde ဆင်းသက်မြန်နှုန်းအသံထက်မြန်ရုဇ်စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းသွားစေခြင်းမရှိဘဲနိမ့်အမြန်နှုန်းမှာပိုမိုမြင့်မားဓာတ်လှေကားကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတောင်ပံပရိုဖိုင်း၏ Concorde ရဲ့ပိုပြီးသန့်စင်ပြီးဒီဇိုင်းကြောင့် ကောင်းစွာ။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)